मेरो आईफोन स्क्रिन कालो छ! यहाँ म किन यस्तो हुन्छ वास्तविक कारण बताउँछु। - अन्य
एसएमएस र imessage बीच के फरक छ?
किन मेरो फोन संग मेरो fitbit सिc्क अभ्यस्त
स्क्रिनमा आईफोन रंगीन लाइनहरु छोडियो
किन मेरो फोन चार्ज छैन?
मेरो आईफोन स्क्रिन कालो छ! यहाँ म किन यस्तो हुन्छ वास्तविक कारण बताउँछु।
La Pantalla De Mi Iphone Esta En Negro
तपाईंको आईफोन खुला छ, तर स्क्रिन कालो छ। तपाईंको आईफोन बज्यो, तर तपाईं कललाई जवाफ दिन सक्नुहुन्न। तपाईंले आफ्नो आईफोन बन्द गर्न को लागी कोशिश गर्नु भयो, यसलाई ब्याट्री बिना नै छोड्नुभयो र यसमा र तपाईंको आईफोन स्क्रिन पुन प्लग गर्नुहोस् अझै कालोमा छ । यस लेखमा, म तपाईंलाई व्याख्या गर्नेछु किन तपाईंको आईफोन स्क्रिन अँध्यारो भयो Y यसलाई ठीक गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ।
किन मेरो आईफोन स्क्रिन कालो छ?
कालो स्क्रिन तपाईको आईफोनको साथ हार्डवेयर समस्याको कारण हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै द्रुत फिक्स हुँदैन। त्यो, एक सफ्टवेयर गल्ती भने सक्छ तपाईको आईफोन स्क्रिन फ्रिज बनाउनुहोस् र कालो बन्नुहोस्, त्यसो भए के हुन्छ भनेर हेर्न फोर्स रिबुट गर्न प्रयास गरौं।
पुनःसुरु गर्न बल गर्न, थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् पावर बटन (स्लीप / वेक बटन पनि भनिन्छ) र सुरु बटन (स्क्रिन मुनिको गोलाकार बटन) कम्तिमा १० सेकेन्डको लागि।
आईफोन or वा Plus प्लसमा, थिच्दै बल पुन: सुरु गर्नुहोस् भोल्युम डाउन बटन र पावर बटन एकै समयमा एप्पल लोगो स्क्रिनमा देखा पर्दा सम्म।
र यदि तपाईंसँग आईफोन or वा नयाँ आईफोन छ भने, भोल्यूम अप बटन थिचेर बल पुनः सुरु गर्नुहोस्, तब भोल्युम डाउन बटन थिच्नुहोस् र त्यसपछि प्रेस गर्नुहोस् र पावर बटन (आईफोन)) वा साइड बटन होल्ड गर्नुहोस्। (आईफोन एक्स वा नयाँ) जब सम्म एप्पल लोगो देखा पर्दैन।
यदि एप्पल लोगो स्क्रिनमा देखा पर्दछ भने, तपाईको आईफोनको हार्डवेयरको साथ त्यहाँ कुनै समस्या छैन - यो सफ्टवेयर गल्ती हो। मा मेरो अन्य लेख जाँच गर्नुहोस् स्थिर आईफोनहरू , जसले तपाइँको आईफोन मर्मत गर्न के गर्न भनेर तपाइँलाई भन्नेछ। यदि एप्पल लोगो स्क्रीनमा देखा पर्दैन भने, पढ्नुहोस्।
कसरी पीसी मा मेरो आईफोन खोज्न को लागी
तपाईंको आईफोनको भित्र हेरौं
तपाईंको आईफोनको भित्री यात्राको छोटो यात्राले तपाईंलाई स्क्रिन कालो किन छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। हामी हार्डवेयरको दुई टुक्राको बारेमा कुरा गर्नेछौं: स्क्रीन तपाईको आईफोन र मदरबोर्ड / मदरबोर्ड ।
मदरबोर्ड तपाईको आईफोनको अपरेसनको पछाडि मस्तिष्क हो, र तपाईको आईफोनको प्रत्येक भाग यसमा जडान हुन्छ। को स्क्रीन तपाईले देख्नुहुने छविहरू देखाउँदछ, तर मदरबोर्ड / मदरबोर्ड तपाइँको स्क्रीन बताउँछ के देखाउनु।
आईफोन मा मेरो सबै नोट हरायो
तपाईंको आईफोन स्क्रीन हटाउनुहोस्
तपाईंको आईफोनको सम्पूर्ण स्क्रीन हटाउन योग्य छ, तर यो तपाईंको सोच्नेभन्दा धेरै जटिल छ! त्यहाँ चार मुख्य घटकहरू तपाईंको आईफोन स्क्रिनमा निर्मित छन्:
LCD स्क्रिन, जसले तपाईको आईफोनमा छविहरू देखाउँदछ।
को Digitizer , जो स्क्रिनको अंश हो जुन टच (टच प्रणाली) लाई प्रशोधन गर्दछ। यो भाग स्क्यान औंला, जसको मतलब हो कि यसले तपाईंको औंलाको स्पर्शलाई डिजिटल भाषामा रूपान्तरण गर्दछ जुन तपाईंको आईफोनले बुझ्न सक्दछ।
तपाईको आईफोन स्क्रिनको प्रत्येक कम्पोनेटरमा एक कनेक्टर छ अलग त्यो तपाईंको आईफोनको मदरबोर्ड / मदरबोर्डमा जडान गर्दछ। त्यसैले स्क्रिन कालो भए पनि तपाईं आफ्नो औंलाले स्क्रिनलाई स्लाइड गर्न सक्नुहुनेछ। डिजिटाइजरले कार्य गर्दछ, तर LCD स्क्रिनले गर्दैन।
कालो स्टिक स्क्रिनको डाटा कनेक्टर छुन्छ
धेरै केसहरूमा, तपाईको आईफोन स्क्रिन कालो छ किनकि LCD स्क्रिनलाई मदरबोर्ड / मदरबोर्डमा जोड्ने केबल काटिएको छ। यो केबल भनिन्छ डाटा कनेक्टर प्रदर्शन गर्नुहोस् (वा अंग्रेजीमा डाटा डाटा कनेक्टर प्रदर्शन गर्नुहोस्) जब प्रदर्शन डाटा कनेक्टर मदरबोर्डबाट विच्छेद हुन्छ, तपाईंको आईफोन फेरि प्लग इन गरेर मर्मत गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ अन्य केसहरू छन् जहाँ समाधान यति सरल छैन, र यो जब एलसीडी स्क्रिन बिग्रिन्छ। जब त्यो हुन्छ, एलसीडी स्क्रिन मदरबोर्डमा जडान भएको छ वा छैन फरक पर्दैन - LCD स्क्रिन बिग्रिएको छ र बदल्न आवश्यक छ।
म कसरी जान्दछु यदि मेरो स्क्रिन विच्छेदन भएको छ वा टुक्रिएको छ भने?
मँ यस बारे लेख्न वा लेख्न असुरक्षित छु, किनकि त्यहाँ कुनै सटीक र द्रुत सूत्र छैन, तर मैले आफैंलाई दिएँ आईफोनसँग काम गर्ने मेरो अनुभवको बान्कीको खाता। त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन, तर मेरो अनुभवले मलाई निम्न देखाउँदछ:
यदि तपाईंको आईफोन स्क्रिन पछि काम गर्न छाड्यो भने त्यो खसे वा हिट भयो , तपाईंको स्क्रिन शायद कालो छ किनकि LCD केबल (प्रदर्शन डाटा कनेक्टर) मदरबोर्डबाट अलग गरिएको छ।
यदि तपाईंको आईफोन स्क्रिन पछि काम गर्न छाड्यो भने यो भिजेको थियो, तपाईंको स्क्रिन शायद कालो छ किनकि LCD स्क्रिन बिग्रिएको छ र बदल्न आवश्यक छ।
कसरी आईफोनमा कालो स्क्रिन ठीक गर्ने
तपाइँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छनौट गर्नुहुन्छ कि तपाइँको आईफोनको LCD केबल मदरबोर्डबाट अलग्गिएको छ वा LCD स्क्रिन बिग्रिएको छ भन्नेमा निर्भर हुन सक्छ। तपाईले माथिको नियमलाई शिक्षित अनुमान बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि LCD केबल काटिएको छ भने, एक एप्पल स्टोर मा विशेषज्ञहरु तिनीहरूले गर्न सक्छन् यसलाई नि: शुल्क मर्मत गर्नुहोस्, तपाईंको आईफोन ग्यारेन्टी नभए पनि। यो किनभने समाधान अपेक्षाकृत सरल छ: तिनीहरूले तपाईंको आईफोन खोल्नेछन् र मदिजबोर्डमा डिजिटलाइजर केबल पुन: जडान गर्नेछ। यदि तपाईं यो निर्णय लिने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, विशेषज्ञहरु संग भेट तपाईं त्यहाँ पुग्नु भन्दा पहिले, तपाईं केहि समयको लागि उभिएर समाप्त हुन सक्नुहुन्छ।
आईफोन7टच स्क्रीन मुद्दाहरु
यदि LCD स्क्रिन बिग्रिएको छ भने, त्यो अर्को कथा हो। तपाईको आईफोन स्क्रिन मर्मत गर्न धेरै महँगो पर्दछ, विशेष गरी यदि तपाई एप्पल समर्थनमा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक उच्च गुणवत्ता र कम खर्चिलो विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु नाडी , एक मांगमा मर्मत सेवा जुन तपाईंको घरमा आउँदछ, तपाईंको आईफोनलाई घटनास्थलमा मर्मत गर्दछ, र तपाईंलाई आजीवन वारेन्टी प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो हालको आईफोन मर्मत गर्नुको सट्टामा नयाँ आईफोन प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, मर्मत उपकरण जाँच गर्नुहोस्। अपफोन फोन तुलना। तपाईं प्रत्येक वायरलेस सेवा प्रदायकमा प्रत्येक स्मार्टफोनको मूल्यहरू तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। वाहकहरू तपाईंलाई तिनीहरूको सेवाहरू प्रयोग गर्न उत्सुक छन्, त्यसैले तपाईं हालको आईफोन मर्मत गर्नुभयो भने तपाईंले खर्च गर्ने समान मूल्यको लागि नयाँ आईफोन प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईको आईफोन आफै मर्मत गर्नु सामान्यतया राम्रो विचार होईन
स्टार-आकारको (pentalobe) स्क्रूहरूले तपाईंको आईफोन बन्द राख्दछ
मेरो फोन को ब्याट्री किन यति छिटो ड्रेन हुन्छ?
आईफोनहरू प्रयोगकर्ता द्वारा खोल्ने उद्देश्यले गर्दैन। तपाईको आईफोनको चार्जिंग पोर्टको पछाडि दुई स्क्रूमा हेर्नुहोस्: ती तारा जस्तै आकारका छन्! यो भनेपछि, त्यहाँ छन् राम्रो मर्मत त्यहाँ बाहिर गाइड, यदि तपाईं साहसी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यो लेखमा तस्बिर लिएँ iFixit.com मा एक मर्मत गाइड बाट आईफोन Front फ्रन्ट पैनल असेंबली प्रतिस्थापन। यहाँ त्यो लेखबाट छोटो अंश छ जुन परिचित लाग्न सक्छ:
“जब तपाईं एक साथ आफ्नो फोन राख्नु भयो, प्रदर्शन डाटा केबल यसको कनेक्टर बाहिर आउन सक्छ। यो सेतो रेखा वा एक खाली स्क्रीन परिणाम हुन सक्छ जब तपाईं फोन पछाडि खोल्नुहुन्छ। यदि त्यसो भयो भने, केवल तपाईंको फोनलाई केबल र पावर साइकल पुनः कनेक्ट गर्नुहोस्। ' फोहरा: iFixit.com
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको आईफोन एलसीडी केबल (डिस्प्ले डाटा केबल) भर्खर तर्कशास्त्र बोर्डबाट आएको छ, तपाईं धेरै प्रविधिक जानकार हुनुहुन्छ, र एप्पल स्टोरमा जानु विकल्प विकल्प छैन, पावर केबल पुन: कनेक्ट गर्नुहोस्। डिस्प्लेबाट तर्क बोर्डमा डाटा छ हैन कडा , यदि तपाईंसँग सही उपकरणहरू छन्।
स्क्रीन बदल्दै छ धेरै जटिल, शामिल कम्पोनेन्ट्सको संख्याको कारण। मलाई स्पष्ट हुन दिनुहोस्: म हैन म सुझाव दिन्छु कि तपाईं यी समस्याहरू आफैंमा सुधार्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि तपाईंलाई प्रक्रियामा केही चीजहरू भत्काउन र तपाईंको आईफोन बर्बाद गर्नु सजिलो छ।
तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले के गर्नु पर्छ
धेरै पाठकहरू केवल यो लेख पढेर आफ्नो आईफोन स्क्रिन ठीक गर्न सक्षम हुँदैनन्, किनकि कालो आईफोन स्क्रिन सामान्यतया सफ्टवेयर समस्याको कारणले हुदैन। तपाईंको आईफोन स्क्रिन अँध्यारो नहुन्जेल सबैकुरा ठीक छ। हुनसक्छ तपाईं आफ्नो आईफोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईंलाई थाँहा छ गर्नु पर्ने त्यसो भए तलको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईंले आफ्नो आईफोन कसरी मिलाउनुभयो भन्ने जान्नमा म इच्छुक छु, र तपाईंले प्रदान गर्न सक्ने कुनै अनुभव पक्कै पनि अन्य पाठकहरूलाई समान समस्याको साथ मद्दत गर्दछ।
पढ्न को लागी धन्यवाद र म तपाईलाई राम्रो चाहान्छु,
सबै आईफोनका चित्रहरू यस लेख मा छन् बाट वाल्टर ग्यालन र इजाजतपत्र अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ -NC-SA ।